Hanova zavatra ve?
2008-06-13 @ 09:59 in Spaoro
Nitamberina tany amin'ny fahazazana ny saina nandinika ity tsy fahitanay mpitia baolina ny mivantana avy any Eoropa ity. Nitamberina tahaka ny ahoana moa? Ka tamin'izany vitsy ny manana fahitalavitra ary noho ny fisakaizana eo amin'ny samy ankizy dia mijery eo amin'izay manana fahitalavitra ny rehetra. Izay rehetra nahaliana ny ankizy dia niaraha-nijery avokoa. Tsy ambakan'izany ny lalao baolina fandaka isaky ny alahady tamin'ny enina ora nijery ny Rainiboto izay nalaza tamin'izany fotoana izany. Ny sary nahetsika tahaka ny bouba sy Tom sawer moa no tena fiady hevitra sy nifampitantarana tamin'izany fotoana izany. Azo lazaina fa mbola tsara ny fiaraha-monina tamin'izany fotoana izany satria nifampiditra an-trano soa aman-tsara ny rehetra. Nisy ny fifampitokisana ary tsy mbola tratran'izany zavatra very izany aloha ny tao an-trano tamin'izany fotoana.
Ankehitriny, azo atao ve ny manonofy ny tahaka izany? Sarotra ny hino satria izahay tamin'izany mitovitovy avokoa ny saranga na dia samihafa aza ny fihaviana sy foko avokoa aza. Ny ankamaroan'ny olona manana ny tvf na parabole na canalsat amin'izao fotoana izao any amin'ny saranga ambony (mba tsy ilazana hoe miaingitraingitra mitandro ny fahadiovan'ny trano kokoa noho ny fanajana ny mahaolona, miala tsiny raha misy ny voatohina) sarotra atonina ihany.Olona manana fanetretena goavana na tena mpinamana akaiky tsy mifampihafahafa matoa tafiditra any an-tranon'olona hijery baolina fandaka izany.
Fa mahagaga lehiretsy fa eto Antananarivo tsy hita firy ny bar na restaurant na pub na club manao tolotra ijeren'ny olona Euro 2008 a! nefa any amin'ny faritany ve izany tsy betsaka ny mampilendalenda ny olona hijery baolina any aminy? Tena tsy maintsy bitsika sy toho-tsofina ihany izany vao mety hahalala izay toerana mety hahitana baolina k'ty. Video iray ihany izao no fantatro (avy amin'ny TF1 ny asehony olona) fa sady lavitra anay nefa tsy manisy soratra amin'ny tabilao an! Mahery ity fitiavam-baolina ity lehiretsy fa mampirediredy.